औद्योगिक क्रान्तिको लागि कपडा उद्योग : जितेन्द्र लोहिया
बिहिवार, मंसिर ५, २०७६ ०४:१६:३६
शनिवार, जेठ २५, २०७६ News Missile
निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापनमा केन्द्रित रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट मार्फत केही बस्तुको विशेष संरक्षण लिएको छ। दुई दर्जन उपभोग्य बस्तुमा आत्मनिर्भर हुने जनाएको छ। लामो समयदेखि छुट दिने र काट्ने सवालमा बहसमा रहेको कपडा उद्योगको लागि विशेष छुटका योजना अघि सारेको छ।
कपडा उद्योगमा विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अनुदान दिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरलाई एक तहको फरक पार्ने र मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट दिने उल्लेख गरिएको छ।
बजेट मार्फत् दिइएको सुविधाले नेपाली कपडा उद्योगको प्रवर्द्धन र उत्पादन वृद्धिमा कस्तो प्रभाव पर्ला। उद्योगीका माग बजेटबाट पूरा भएका हुन्? यसको असर कस्तो रहला ? लगायतका विषयमा नेपाल कपडा उद्योग संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र लोहियासँगको संक्षिप्त कुराकानी :
तपाईहरूले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा कटौति गरेसँगै भ्याट फिर्ताको माग जोडतोड उठाउनु भएको थियो। अनेक छुटका विच यो विषयमा चाँही सम्बोधन भएन यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ ?
मुलरुपमा किन समस्या पर्र्योे भन्ने कुरा ख्याल गर्न पर्यो हामीले के कारणले संरक्षणको माग गरेका छौँ भन्ने राज्यले बुझ्नु पर्यो। हाम्रो दुई हजार किलोमिटर लामो खुला सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। हुन त चीनसँग पनि हाम्रो सिमाना छ। त्यो खुला भएपनि हाम्रो सहज पहुँच छैन। भारतसँगको सिमानामा सहज पहुँच छ।
हाम्रो उपभोक्ता सहज पुहँच छ। उपभोक्ताले सीमावर्ती बजारबाट अर्बौ रुपैयाँको कपडा ल्याउने गरेका छन्। हामीले कुनै पनि प्रकारले अध्ययन गर्यौ भने त्यसले पुष्टि गर्छ। त्यस्तो कपडामा कुनै पनि प्रकारको राजस्व हाम्रो राज्यले प्राप्त गर्न सकेको छैन। अहिले हामीले ७ अर्बको उत्पादन गरिरहेका छौं।
आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत अवैधानिक आयात रोकिएमा ७० अर्ब माथि पुर्याउँन सक्छौँ त्यो कपडासँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ। चोरी पैठारी, न्यून विजीकरणको समस्या उस्तै छ। अहिलेको अवस्थामा २ डलरभन्दा घटीमा प्रतिकिलोमा गार्मेन्ट आयात भएको छ। यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै कसरी ट्याक्समा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो।
हाम्रो वैधानिक आपूर्तिको अवस्था प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष १४ सय रहेको छ। माग भने १२ हजारभन्दा बढी रहेको छ। यसको ठूलो खाडल छ। माग र वैधानिक आपूर्तिको फरक १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ। ९० प्रतिशत सामानमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्नु र यहाँको एउटा स्थानीय उद्योग विकास नभइ सकेको अवस्थामा सबै कर तिरेर उद्योग चलाउन गाह्रो हुन्छ। कार्यान्वयन हुने नहुने कुरा आफ्नो ठाउँमा रहला।
पटक पटक अवैधानिक आयात रोकिने प्रतिवद्धता आएको थियो नि हैन र कि पूरा भएन ?
हो पटक पटक प्रतिवद्धता आएको छ र पूरा पनि भएको छ। तर अबैधानिक रोक्न सवालमा हैन। बैधानिकको मूल्यांकन बढाउने। केही मात्रमा भन्सार विन्दुबाट प्रवेश गर्ने वस्तुमा मूल्यांकन बढाइएको अवस्था छ।
बैधानिकको भन्सार बिन्दु बढाउनको के अर्थ रह्यो र ?
बैधानिक कपडा भनेको १० प्रतिशत वैधानिक छ भने त्यसमा एक २ प्रतिशत फरक परेर केही हुने वाला छैन। हामी कुनै पनि सीमावर्ती बजारमा गयौ भने कपडाको व्यापार निरन्तर थपिएको छ। त्यहाँको बजार विस्तार भइरहेको अवस्था छ । कपडाकै व्यापारको कारण रक्सौलमा जग्गाको मूल्य भारतको मुम्बई बराबर भएको छ।
नेपाली उपभोक्ताका कारण त्यहाँको बजार फस्टाएको छ। त्यहाँ सबैभन्दा बढी बिक्ने कपडा नै हो। अवैधानिक आयत नै उपभोक्ताले किनेर ल्याउँदा पनि अवैधानिक नै हो। हाम्रो उद्योगको क्षमता विकास नभएको अवस्था छ। क्षमताको विकास भएको भए केही न केही लागत कम हुने थियो। हामी पारिपट्टीको बजार गयौँ भने त्यहाँ प्रत्यक्ष कर पाँच प्रतिशत छ।
हाम्रोमा भ्याट १३ प्रतिशत छ। त्यहाँका उद्योगीले लामो समयदेखि छुट पाएका छन्। हामीले पनि सके भ्याट छुट नभए भारत बराबरको कर भनेका छौँ। सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन। अबैधानिक आयातसँग प्रतिस्पर्धा गरेर उद्योग चलाउन समस्या छ। सरकारले यति ठूलो छुट दिएको छ।
विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट, बैंकबाट लिने कर्जामा ५ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज अनुदान छ यसको प्रभाव उत्पादनमा देखिँदैन नि ?
केही प्रभाव अवस्य पर्छ। तर, कतिपय उद्योग स्वःलगानीमा छन् ,जसमा ऋणको अवस्था नै छैन। केही उद्योगमा ऋण पनि लिएका छन् राहत पुग्छ। अहिले दुखेको घटाउन सिटामोल दिए जस्तो हो, यसले हामीलाई दुख्नमा केही हदसम्म कम गरेको छ। कस्तो बिरामी हो, के औषधि आवश्यक पहिचान भएको देखिँदैन। त्यसको जड फाल्न एन्टिबायोटिक नै चाहिन्छ। राज्यले एन्टिबायोटिक दियो भने यसको समस्या समधान हुन्छ। नत्र हुन सक्दैन।
अहिलेको छुटले विकासको कुरै नगरौँ विकास त ल्याउँदै–ल्याउँदैन कपडा उद्योगको सवालमा। खुला सिमाना भएर भारतको नीतिलाई विचार नै नगरेर हामीले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौँ। यस्तो अवस्थामा मलाई लाग्दैन यसको प्रभाव पर्छ। कपडा चोरी पैठारीमा आएको छ। हामी अहिले नै सिमानामा हेरौँ, ९० प्रतिशत पसल कपडा लत्ताको पाइन्छ।
कपडा किन्ने अधिकांश नेपाली रहेका छन्। पाँच प्रतिशत कर तिरेको व्यापारीसँग हामीले १३ प्रतिशत भ्याट तिरेर प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छौँ ? अनि कसरी विकास होला र ? सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको एक सातापछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने निजी क्षेत्रका ११ संगठनहरू एक ठाउँमा उभिएर आफ्नो गुनासो पोखेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जम्मा ३ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जम्मा छ प्रतिशत योगदान गरेका निर्यात कर्ताहरुले आफ्ना मागहरू पूरा नभए निर्यातमा पूर्ण ह्रास आउन सक्नेमा सचेत गराएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने १२ खर्ब ५६ अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भएकोमा ७८ अर्बको निर्यात र ११ खर्ब ७८ अर्बको आयात व्यापार देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, जेठ २५, २०७६, ११:०६:००
मूल्य बढ्दा सुनको कारोबार २५ प्रतिशत पनि हुन सकेन
आफ्नै कार्यविधि मिचेर काम गर्ने प्रवृत्तीले सरकारलाई गिज्याएको छ : पूर्वसचिव भुसाल
डा. देवकोटाको राजिनामा सवैको चासो
शनिवार, श्रावण ४, २०७६ News Missile
पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सरकारको दोस्रो वायुयान कम्पनी नबनोस् : जयराम लामिछाने
शनिवार, असार २८, २०७६ News Missile
राम्रो काम नगरे हटाइने र राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन : मन्त्री भट्टराई बुधवार, मंसिर ४, २०७६ -->
पाँच बर्षलाई अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री
राइड थ्रु सिन्धुलीगढी साइकलयात्राको कार्यक्रमतालिका यस्तो छ:
अन्तर्राष्ट्रिय कलाकार समाज (इनास) काे ग्लोबल सल्लाहकार समिति गठन
ग्लोबलको १३ औँ साधारणसभाले जनता बैंक नेपाललाई गाभ्ने प्रस्ताव पारित
आफ्नो भूगोल मिचिँदा कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप
कोही नछुटौं नाराकासाथ विश्व चर्पी दिवस
१३औं दक्षिण एसियाली गेम्स (साग) खेलकुदमा फोटो खिच्न पाउने
लुट मच्चाउनेहरुको सातपुस्ते सम्पत्ति जफत नगरेसम्म सुशासन हुन नसक्ने : वरिष्ठ नेता नेपाल
हाम्रो सामाजिक संरचना र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति News Missile
दलीय भागबण्डाकाे भूमरिमा शिक्षा News Missile
काठमाडौं महानगरपालिकाको भ्रम चिर्नु आवश्यक News Missile
मूल्य बढ्दा सुनको कारोबार २५ प्रतिशत पनि हुन सकेन शनिवार, श्रावण २५, २०७६
कार्गाेमा हिडेन कस्ट बढी भयो: राजन शर्मा शनिवार, श्रावण १८, २०७६
सिफारिस हुन इच्छुक व्यक्तिहरुको नामावली सार्वजनिक सोमवार, मंसिर २, २०७६
रामग्राम स्तूप क्षेत्रकाे जियो फिजिक्स सर्भे शुक्रवार, कार्तिक २९, २०७६
सिन्धुलीगढीको अस्तित्व धरापमा शनिवार, कार्तिक २३, २०७६